Posted on July 16, 2017 by 99celebrity	हातमा बन्दुक बोक्दै किन न्यूयोर्क शहर घुमे नवाजुद्दीन ?Rate this post बलिउड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहिले अमेरिकामा छन्। उनी त्यहाँ भएपनि भारतमा झैं लुंगी लगाएर र हातमा बन्दुक बोकेर घुमिरहेका पाइएको समाचारमाध्यमले जनाएका छन्। एक अवार्ड कार्यक्रममा सहभागी हुन न्यूयोर्क पुगेका उनी लुंगी, चस्मा लगाएर एक हातमा बन्दुक र अर्कोमा एक बट्टा बोकेर त्यहाँको सडकमा निस्केका थिए।
नेपाली हातमा बन्दुक बोक्दै किन न्यूयोर्क शहर घुमे नवाजुद्दीन ?	Post navigation
नर्स रेणुका गीत लेखनसँगै गायन पेशामा रमाउँदै	गायक प्रशान्त तामाङ प्रहरीको जागिरबाट बर्खास्त ! Search 1000+ Celebrities	Popular Posts	Recent Posts	उषा अब निर्मात्री, बन्ने भयो ‘आउँदै जादै’